Kedu usoro nyiwe ahịa kachasị mma? | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 18, 2014 Tọzdee, Disemba 18, 2014 Douglas Karr
Biko kwusi iju a. Anaghị m egwu egwu. Enweghị kasị mma. Oge.
Ọ bụ ajụjụ ndị ahịa na ndị ọkachamara n’ozi ụlọ ọrụ na-ajụ m ugboro ugboro. Ọ bụ ajụjụ enweghị ike ịza ma ọ gwụla ma enwere ụlọ ọrụ zuru oke nke ga-eji ikpo okwu.
dị ka a na-ere ndị na-ere ahịa maka teknụzụ ahịa, Anyị emeela nlezianya maka ụlọ ọrụ itinye ego, anyị nyochara ụlọ ọrụ teknụzụ azụmaahịa, anyị wee jụọ ọtụtụ ụlọ ọrụ na nyocha nke nyiwe maka ịzụta.
Otu nwere ike iche na ọ dị nfe dị ka ijikọta ndepụta atụmatụ yana naanị ịlele igbe dị na ntanetị maka ndị ahịa ọ bụla, yana ịchọpụta mmefu ego dị mkpa maka ikike ọ bụla. Okwu nzuzu. Nke ahụ dị ka inyocha uwe ogologo ọkpa site na ma ha nwere ụkwụ abụọ, eriri loops, akpa, na zipa - wee hụ ego ha na-eri. Ajụjụ a na-azabeghị bụ ụdị agba ọkpa kwesịrị ịbụ, ebe a ga-eyi ha, ma ha achọrọ nhicha na ịkpụ, kedu ka ha ga-eyi, ha kwesiri ikwekọ n'ụdị ndị ọzọ.
Indị ihe dị na ya bụ ahịa email. Anyị maara ọtụtụ ụlọ ọrụ ahịa email dị iche iche. Fọdụ dị oke ọnụ mana nye ha ọtụtụ ọrụ maka ijide mkpọsa gị. Fọdụ na-amalite n'efu ma jikọta na nyiwe ndị ọzọ nke atọ. Fọdụ nwere API siri ike nke enwere ike ijikọ site na mmepe mmepe. Fọdụ nwere oke ozi email iji zipu ọtụtụ nde ozi ịntanetị kwa nke abụọ. Havefọdụ nwere ọtụtụ puku ndebiri ịhọrọ.
Ọ dị mkpa iji nyochaa akụrụngwa nke ụlọ ọrụ, ọkaibe nke onye ọrụ, oge achọrọ iji tinye aka iji hụ na ebupụtara atụmatụ ahụ nke ọma ma mezuo ya, mmefu ego maka ikikere, njikọta, mmejuputa na ojiji, yana ịlaghachi na ntinye ego nke ikpo okwu. Anyị anaghị eme otu nkwupụta ahụ sitere n'aka onye ahịa anyị gaa na nke ọzọ na nyiwe ọ bụla - ọbụlagodi mgbe anyị na ndị na-ere ahịa nwere mmekọrịta.
Bụ onye na-ere ahịa amaghị ihe ọ bụla dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ndị na-eweta ihe na-eme ka ị nwee ike ịlaghachi nloghachi na azụmaahịa na nzụta na atụmatụ.
Nke a apụtaghị na enweghị nyiwe anyị na-akwado karịa ndị ọzọ. N'ihu njikwa ọdịnaya, dịka ọmụmaatụ, anyị na-akwado WordPress karịa nyiwe ndị ọzọ. Ọ bụghị na WordPress bụ n'efu - ọ bụghị otu oge ị gbakwunye imewe, mmepe, njikarịcha na okike ọdịnaya n'ime mmejuputa nke ọma. Mana WordPress na-etikarị nyiwe ndị ọzọ naanị n'ihi na ọtụtụ nhọrọ nke plugins, njikọta, nkwado ndị ọzọ, nhazi nnabata, na nhọrọ nke isiokwu ndị emeburu. Enwere ike, n'ezie mma sistemụ njikwa maka ịdị mfe nke iji, njikarịcha, nchekwa, wdg.… mana mgbanwe na nnweta nke akụrụngwa ka nwere ike ịgafe mkpebi iji kwado ikpo okwu.
M na-ekwu banyere ngwa ọrụ na ihe omume n’izu a na Smartups na Indy ma esonye m Kevin Mullett na Julie Perry. Kevin zụlitere ndụmọdụ dị mfe ma dịkwa oke egwu…
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị. You'll ga-eji ya.
Mgbe ụfọdụ ọ bụghị ọbụna mgbịrịgba niile na mkpịsị ma ọ bụ ọnụahịa, mgbe ụfọdụ ọ bụ naanị na ị hụrụ onye ọrụ ọrụ n'anya ma nwee ọ usingụ na iji ngwa ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị iji ikpo okwu, o yikarịrị ka ị ga-etinye ya n'ọrụ!
Kedu ihe kacha mma? Ihe niile dabere!
Tags: nyiwe ahia kacha mmaikpo okwu kacha mmateknụzụ kachasị mma
VB Insight: Ndị nyocha na ọnụ ọnụ, Akụkọ Real-World
Elektronik sigara ahịa
Jenụwarị 3, 2015 na 4:40 PM
Daalụ maka ozi na ide….